Mkpọchi okwuntughe Ugbu a dị na Evernote | Gam akporosis
Evernote na-bụ nke ngwa na ọrụ kacha mma iji mee ka ndetu anyị mekọrịta n'etiti ngwaọrụ niile anyị nwere. Akwụkwọ ndetu ya, mkpado ya na ike ya ịkekọrịta ọrụ, emeela ka ọ bụrụ ngwa na-atọ ụtọ nke ọtụtụ ndị ọrụ tụgharịrị na nhọrọ ya dị oke ọnụ. Ọ chọtawokwa ụzọ isi nye nnukwu ọrụ site na nsụgharị ya n'efu, ihe siri ike ịme taa.
Otu n'ime atụmatụ ndị dị oke elu nke Evernote site na taa abụrụla n'efu ma nke a bụ ike igbachi site na paswọọdụ gị Evernote. Ike a dị maka ndị ọrụ adịchaghị oke ma ọ dị mma maka ndị na-ekenye ndị ọzọ mbadamba nkume ha ma ọ bụ ekwentị ha achọghị ka ha nwee ike ịhụ ụfọdụ ederede nke gụnyere ozi nzuzo ma ọ bụ nke nzuzo.
Dị ka ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, ha ka na-achọ usoro zuru oke enye ọrụ adịchaghị na ha na-enweta onye ọrụ iji kwụọ ụgwọ kwa ọnwa maka ha yana ọrụ na-akwụghị ụgwọ nke na-eje ozi dị ka mkpọtụ ma ọ bụ edemede edemede maka ndị ọrụ ọhụụ achọpụtala na, na-akwụghị penny, ngwa nwere ike ijere ha ozi. Evernote agbadoro nke a ma nwekwaa ike iweda atụmatụ ndị adịkarịghị na ụdị mbipute ahụ.
Anyị amatalarị njirimara njirimara nke paswọọdụ nke ọma site na ọrụ na ngwa ndị ọzọ, ọ bụkwa tinye 4 digits nke ahụ ga-ahụ maka inyefe nzuzo na nchekwa dị ukwuu na ekwentị gị. Open mepee Evernote, pịa bọtịnụ ahụ nwere akara atọ yana aha gị, hazie mkpọchi paswọọdụ menu ma kwenye na ọ ga-adị njikere.
Ihe ọhụrụ a maka ụdị n'efu enwere site na ihe nkesa, ya mere ọ dịghị mkpa imelite ụdị ọ bụla ọ bụla, ebe ọ bụ na ewepụtara nke ikpeazụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu gara aga. Otu Evernote nke otu ọnwa gara aga ihe omuma a di nma.
Evernote - Nhazi ndetu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nwere ike iji mkpọchi okwuntughe n'efu na Evernote